Kedu ka esi eto eto na asters
Astra bụ ụdị dị iche iche nke okooko osisi. Ọ dị mfe ikwu ihe agba chaa chaa: agbama na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. E nwere ọbụna nkata abụọ-agba, nke na-adịghị ahụkarị n'ụwa nke agba. Nke a na-eme ka mmasị nke ndị na-elekọta ubi na-akpali mmasị nke ndị na-emepụta ebe ọdịda anyanwụ. Ma aster, dị ka osisi ọ bụla ọzọ, chọrọ ụzọ pụrụ iche maka ịkụ mkpụrụ.
Almọnd: esi akụ ma lekọta
Osisi almọnd bụ obere osisi ma ọ bụ osisi bara ụba nke bụ onye ikwu nke osisi ahụ. N'adịghị ka nkwenkwe a ma ama, almọnd abụghị mkpụrụ; ha bụ mkpụrụ osisi siri ike. A na - atụle Asia dị ka ebe a mụrụ ebe osisi a, ma ugbu a almonds na - eto eto n'ọtụtụ akụkụ nke ụwa, ọ na - eto eto na ụfọdụ United States, n'ugwu Tien Shan, China, na Europe, almọnd na - agakarị na mba Mediterenian na Crimea, nakwa na Caucasus. , dị ka a maara, dị na nkwụsị nke Asia na Europe.
Nzọụkwụ nke nzọụkwụ maka ntụ ọka almond na foto
E nwere efere dịgasị iche iche nke chọrọ ntụ ọka almọnd dị ka ihe mgwa. A na ere ere dị otú a n'ebe niile, ọ dị oke ọnụ. Ka o sina dị, ntụ ọka si na almond grains nwere ike igwu onye ọ bụla nnabata na kichin ya. N'ezie, ọbụna n'ọnọdụ a, otu ihe yiri ya abụghị ihe ụtọ dị ala, ma ebe ọ bụ na a na-eji ya mee ezigbo ihe oriri na-edozi ahụ iji mepụta okpokoro na-atọ ụtọ, mgbe ụfọdụ, ị ka nwere ike ịba ụba.
Aloe variegated: àgwà nke osisi na nlekọta ụlọ
Ntuziaka kachasị mma maka apụl apụl maka oyi